Akpa ụmụ nwanyị na-eji ejiji - na-acha anụ, agụ owuru, ngwa, akpụkpọ anụ, denim, textile, waaji
Akpa na ebipụta - 24 foto nke ụdị ejiji kachasị mma na ihe ha ga-eji?
Nwa agbọghọ ọ bụla na-eche na ihe oyiyi ya dị ntakịrị, na-elebara anya na nhọrọ nke ngwa. Ọtụtụ mgbe, nhọrọ nke ụmụ agbọghọ na-eto eto bụ akpa na-ebipụta, na-enye ọhụụ mara mma na nke mbụ.
Akpa na ebipụta 2018
N'ime afọ 2018, akpa ndị na-ebipụta akwụkwọ na-egbuke egbuke ma ọ bụ ngwa ngwa aghọwo otu n'ime ihe ndị kachasị mma. Ụdị ndị a ma ama, na-egosi kpakpando azụmahịa na ndị ọkachamara n'ụwa dịka ihe ndị dị otú ahụ, na-emesi ụdị ejiji ha . Ihe dị mkpa n'oge a bụ akpa na -eme akwụkwọ floral nke 2018, na-eme ka onyinyo ahụ dị oke mma, nụchaa na ihunanya.
Akpụkpọ anụ na-ebipụta
Ngwaahịa nke ezigbo akpụkpọ anụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ikpe nwere udi ndochi mara mma na nhazi imepụta ihe, ka ha wee kwekọọ na ihe ọ bụla nke uwe-akwa. N'ihi nke a, a naghị ahụ foto ndị na-egbukepụ egbukepụ "ngwaahịa" na ngwaahịa ndị a mgbe mgbe. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe ọma na-eme ka ngwaahịa ha dị mma na-adọrọ mmasị na nke mbụ.
A na-enye akpa akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị na mbipụta na nchịkọta nke 2018 site Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci na ụdị ndị ọzọ. A na-enwe mmasị na oge a iji fleur na floral motifs, foto na-adọrọ mmasị site na eserese ma ọ bụ anime, peas dị mfe ma dị nkenke. A na-arụ ọtụtụ ihe oyiyi dị iche iche na agba, ya mere ọ na-adọta mmasị na onye nwe ya.
Akara akpa akwa na-ebipụta akwụkwọ dị ezigbo mma, Otú ọ dị, ha ejikọtaghị ya na uwe nke oge ochie na ihe nke uwe ejiji. Na ngwaahịa ndị a, ị nwere ike ịga ahịa, maka ịgagharị ma ọ bụ nzukọ na ndị enyi - ha bụ ihe ijuanya, ya mere emela ka ahụ erughị ala n'oge sọks. Tụkwasị na nke ahụ, akpa ndị na-eji textile na-ebipụta dị nnọọ ike, ya mere, ha nwere ike iguzogide nnukwu ibu.
Enwere ike iji ihe osise dị iche iche chọọ ya mma - ihe osise dị iche iche nke egwuregwu ma ọ bụ eserese, ụdị ụdị ihe niile, okooko osisi na osisi. Na-ele anya na ngwaahịa ndị dị otú ahụ na eserese ụmụ anụmanụ, nakwa dị ka ihe ndekọ nke òtù egwú ma ọ bụ egwuregwu.
Akwukwo aka na Denim
Ngwa ndị ntorobịa si denim bụ ndị a ma ama n'etiti ụmụ agbọghọ, karịsịa n'oge okpomọkụ. Ha na-ele ihe oyiyi dị iche iche mma - osisi, anụmanụ, obi, ọchị ọchị na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụmụ agbọghọ na-ege ntụrụndụ na-eme ka ndị Rom na-ele anya dị ka mkpụrụ denim na-ebipụta mkpụrụ osisi floral, na-enye onyinyo ahụ ihe dị ịtụnanya na ịmịcha. Tụkwasị na nke a, oge a dị ezigbo mkpa maka ụdị akwụkwọ ndị ahụ, nke a na-eji ejiji ma ọ bụ tinye ya mma.
Akpa ejiji na mbipụta
Akpa nwanyi na mpempe akwụkwọ na-ewu ewu n'etiti ndị inyom dị iche iche. Ha na-enwe ike ime ka oyiyi ahụ bụrụ ọnọdụ pụrụ iche, nke a na-apụghị ịme site na ụzọ ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ ụkpụrụ dị iche iche na-aba uru ruo ọtụtụ afọ, ebe ndị ọzọ, n'ụzọ dị iche, na-ahapụ ọnọdụ ha ọsọsọ ma na-alaghachi azụ. Ka o sina dị, n'ime nhọrọ dịgasị iche iche, nwanyị ọ bụla nwere ike ịhọrọ ihe ọ masịrị ya.
Igbe na agụ owuru
Akpa ụmụ nwanyị na agụ agụ owuru - ihe na-egbukepụ egbukepụ nke onyinyo ahụ, nke ga-abụ naanị ụmụ nwanyị nwere obi ike na obi ike. Mgbe ị na-ahọrọ ihe dị otú ahụ, ọ dị mkpa ịghọta na ọ na-abụkarị isi ihe nke ejiji ejiji, ya mere, a ga-ahọrọ akụkụ ya ndị ọzọ nke ọma.
Ya mere, ngwa ngwa na-adọrọ adọrọ kacha mma karịa ihe dị mfe ma dị nkenke - uwe ejiji, eriri ọnụ , akwa uwe monofilament na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, akpa ụmụ nwanyị n'elu ubu na-ebipụta n'okpuru agụ owuru ga-adabara n'ụzọ zuru ezu n'ime ihe dị mfe nke ọ bụla na-adị kwa ụbọchị na-adabere na jeans ndị mara mma, t-shirts na akwa jaket.
Akpa na ngwa na ebipụta
N'afọ 2018, otu n'ime ihe ndị e ji eme ihe na ụwa nke ihe ndị ọzọ bụ akpa na-ebipụta, nke a na-ejikwa ya mee ihe. Ngwa ndị dị otú ahụ na-adọrọ mmasị ma na-egbukepụ egbukepụ, n'ihi ya, ha na-ahọrọ ụmụ agbọghọ ndị na-achọghị ka ha ghara ịhụ ha. Ọ bụ n'ihi na a ga-egbucha akpa ahụ n'elu akpa ya na mbipụta na ngwa nwere ike na-eyi naanị mgbe ị na-eje ije, ebe ndị enyi na ndị ọzọ na-ezigara.
Akpa akpa na-ebipụta
Akpa azu akpa na-ebipụta maka ụmụ nwanyị, na-eduga ndụ ndụ, bụ ngwaọrụ dị oke egwu nke na-enye gị ohere ịtọ aka gị ma jide ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ngwaahịa a dị mma maka ụmụ agbọghọ ndị ka na-aga akwụkwọ ma ọ bụ mahadum - na nke a, a na-ebutekarị ibu ihe ndị na-akpata nchekasị siri ike. Ụkpụrụ na foto na ngwa ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla - ụdị dị iche iche a na-ewu ewu na onyinyo ahụ na ifuru ha, ihe na-emeghị eme, akara ihe atụ na ihe ndị ọzọ.
Ụkpụrụ na ngwa ngwa nwanyi nwere ike ịbụ ihe a na-apụghị ịhụ anya, na-egbuke egbuke ma na-ekpuchi, nke na-agaghị ekwe omume iwepụ anya. Ndị nke a na-ahọrọ ndị inyom ahụ na-achọ ịnọ na-egbuke egbuke. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ndị a dị mgbagwoju anya, n'ihi na ọ na-esi ike ịchọta ihe ndị kwesịrị ekwesị na uwe akwa na akpụkpọ ụkwụ.
Ya mere, dịka ọmụmaatụ, akpa dị ọcha na mbipụta nke na-eme ka ọdịiche dị n'akụkụ elu ya ga-adọrọ mma na akwa ejiji nke otu n'ime ihe ndị gara aga, ndị na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ na uwe elu ma ọ bụ obere akpa mkpụmkpụ na elu na otu ụdị. Kasị mma, ngwaahịa ndị a dị ka ihe oyiyi e bipụtara na nwa ma ọ bụ ọbara ọbara - ha na-adaba na ndabere na-eme ka ihe ngosi ahụ dị iche iche.
Akpa na anụ na-ebipụta
Akpa mbụ na mbipụta maka agbụrụ anụmanụ nwere ọ bụghị nanị na ọ dị mma nke ọma, ma na-enwekwa ihe ọ pụtara. Dịka ọmụmaatụ, oyiyi nke nkịta na-anọchite anya ikwesị ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ, akpa nke ikwiikwii ikwiikwii jikọtara amamihe na ọgụgụ isi dị elu, na ịbịaru ọnụ anụ ọhịa wolf na-egosi aghụghọ na aghụghọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ọ pụkwara ịgba akaebe banyere obi ike.
Ngwa ndị dị otú ahụ, dịka ngwa ngwa ọ bụla ọzọ, na-adọrọ uche gaa n'aka onye nwe ha, n'ihi ya, a ga-eyi ha naanị maka oge pụrụ iche. Ejila ngwa ngwa ndị dị otú ahụ na-ekpuchi ihe oyiyi - otu akpa aka na onyinyo anumanu bụ iji mee ka foto ahụ anakọtara dị ka nke kwekọrọ na nke gosipụtara.
Kedu ihe iji ebu akpa na ebipụta?
Ọtụtụ ndị na-anọchite anya mmekọahụ na-enwe mmekọahụ dịka ihe gbasara ngwa nwere ihe osise na usoro dị iche iche, ajụjụ ahụ bụ otú e kwesịrị isi yie ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na ihe ha ga-ejikọta. N'eziokwu, enwere ọtụtụ ụzọ isi dee ngwaahịa a n'ụzọ dị mma ma dị mma, Otú ọ dị, ịkwesịrị iji nlezianya mee nke a, ka ị ghara ịtụfe anya ma ghara ịmepụta echiche nke nhọrọ ndị na-enweghị isi.
Ya mere, akpa ụmụ nwanyị na-ede akwụkwọ na-acha okooko osisi na-ele anya nke ukwuu na uwe ejiji ndị inyom na-eyiri onwe ha. N'okwu a, ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke obere okooko osisi ndị dị ka nke dị na akpa ahụ dị mma, ma, e kwesịghị inwe ọtụtụ n'ime ha. Akpa nwa nke nwere ohia nke ifuru na-ele anya nke oma na ihe nile nke ulo mkpofu - oburu na achọrọ, enwere ike ichikota ya na onu ahia.
Ịchọta akụkụ niile nke ihe oyiyi ahụ maka ngwaahịa ndị ntorobịa nwere mpempe akwụkwọ ihe atụ bụ ihe siri ike karị. Ọ kachasị mma ijikọta ngwaahịa ndị a site na jeans dị mfe, T-shirts ma ọ bụ ejiji, ejiji na ụdị nke Gothic na akpụkpọ ụkwụ mmadụ dị iche iche. Uwe ejiji na nke a ga-abụkwa ihe kwesịrị ekwesị, Otú ọ dị, ha kwesịrị ịdị mfe na nkenke dị ka o kwere mee.
Ụmụ nwanyị na-esi ísì ụtọ nke nwanyi
Ọnụ ọnụ na nkume
Mmụọ nke ndị mmụọ
E ji ọlaọcha mee ihe
Isi nke mohair
Okpokoro maka iko Vogue
White okpu na pompon
Nri na cucumbers
Karịa ịsacha ụfụfụ na-arị elu?
Egwuregwu eletriki a na-eti maka ụlọ
Isi na refrjiraeto - olee ngwa ngwa iji tufuo?
Chi Grik nke ọmụmụ
Saute maka oyi
Echinacea maka ụmụaka - nchedo siri ike nke nsogbu
Nlekere anya abalị nile - gịnị ka ọ bụ na otú o si aga?
Kedu otu esi eme ememe ụbọchị ọmụmụ nke mmadụ 18?
Solarium n'oge kwa ọnwa
Na-eto eto na poteto dị mma na ihe ọjọọ
Crafts site cucumbers maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
Ụdị ihe mgbochi nke na-emepụta ihe na-emepụta ihe
Vertigo - ọgwụgwọ
Esi esi esi nri Bechamel ihendori?
Mgbochi na ụdị nke Provence
Nwee aka "onye isi"